Bible Mu Nsɛm Wosiw Stefano Abo - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
ƆBARIMA a ɔkotow ha no yɛ Stefano. Ɔyɛ Yesu suani nokwafo. Nanso hwɛ nea afei wɔreyɛ no! Mmarima yi retotow abo akɛse abɔ no. Dɛn nti na wɔtan Stefano araa ma wɔreyɛ no ade bɔne a ɛte saa? Ma yɛnhwɛ.
Ná Onyankopɔn boa Stefano ma ɔyɛ anwonwade akɛse. Na mmarima yi mpɛ saa, enti wɔne no gyee nokware a ɔde kyerɛkyerɛ nkurɔfo no ho akyinnye. Nanso Onyankopɔn maa Stefano nyansa kɛse, na Stefano ma ɛdaa adi sɛ mmarima yi kyerɛkyerɛ atosɛm. Eyi maa wɔn bo fuwii kɛse. Enti wosoo no mu, na wɔmaa nkurɔfo bɛkekaa ne ho nsɛm a ɛnyɛ nokware.
Ɔsɔfo panyin no bisaa Stefano sɛ: ‘Nea wɔka yi yɛ nokware?’ Stefano de Bible mu ɔkasa fɛfɛ maa mmuae. Awiei no ɔkyerɛɛ sɛnea nnipa bɔne taa Yehowa adiyifo tete hɔ. Na ɔkae sɛ: ‘Mote sɛ saa nnipa no ara. Mukum Onyankopɔn somfo Yesu, na munni Onyankopɔn mmara so.’
Eyi maa nyamesom mpanyimfo no bo fuwii kɛse! Wɔde abufuw twɛree wɔn se guu no so. Afei Stefano maa ne ti so, na ɔkae sɛ: ‘Hwɛ, mihu Yesu sɛ ogyina Onyankopɔn nifa wɔ soro.’ Ɛnna mmarima yi de wɔn nsa sisiw wɔn asõ tow hyɛɛ Stefano so. Wosoo no mu twee no kɔɔ kurow no fasu akyi.
Ɛha no woyiyii wɔn ntade nguguso de maa aberante Saul kurae. Wuhu Saul? Afei ebinom fii ase siw Stefano abo. Stefano kotowee, sɛnea wuhu yi, na ɔbɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ: ‘Yehowa, ntwe wɔn asõ wɔ ade bɔne a wɔreyɛ yi ho.’ Ná onim sɛ nyamesom mpanyimfo no adaadaa ebinom. Eyi akyi no Stefano wui.
Sɛ obi yɛ wo bɔne a, so wobɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ no bi, anaa so woka sɛ Onyankopɔn ntua no ka? Ɛnyɛ saa na Stefano anaa Yesu yɛe. Woyii ayamye adi mpo kyerɛɛ nnipa a wɔyɛɛ wɔn bɔne. Momma yɛmmɔ mmɔden nsuasua wɔn.
Asomafo Nnwuma 6:8-15; 7:1-60.
Hena ne Stefano, na dɛn na na Onyankopɔn boa no ma ɔyɛ?
Dɛn na Stefano kae a ɛmaa nyamesom mpanyimfo no bo fuwii kɛse?
Bere a mmarima no twee Stefano kɔɔ kurow no fasu akyi no, dɛn na wɔyɛɛ no?
Wohwɛ mfonini no a, hena ne aberante a ogyina ntade nguguso no ho no?
Mpae bɛn na Stefano bɔɔ Yehowa ansa na ɔrewu?
Sɛ obi yɛ yɛn bɔne a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ de suasua Stefano?
Kenkan Asomafo Nnwuma 6:8-15.
Nnaadaa akwan bɛn na nyamesom mpanyimfo de Yehowa Adansefo afa so de abɔ mmɔden sɛ wobesiw wɔn asɛnka adwuma no kwan? (Aso. 6:9, 11, 13)
Kenkan Asomafo Nnwuma 7:1-60.
Dɛn na ɛboaa Stefano ma otumi gyinaa Sanhedrin no anim kaa asɛmpa no wɔ nam so, na dɛn na yebetumi asua afi ne nhwɛso no mu? (Aso. 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pet. 3:15)
Adwene bɛn na ɛsɛ sɛ yenya wɔ wɔn a wɔsɔre tia yɛn adwuma no ho? (Aso. 7:58-60; Mat. 5:44; Luka 23:33, 34)